Isitudiyo seNdlu yesikhephe - I-Airbnb
Isitudiyo seNdlu yesikhephe
Indawo yam yesitudiyo ingaphaya kolwandle eTyrell Bay kwaye ecaleni kwevenkile yaseLumba Dive. Kufuphi neNdawo yokutyela yaseSlipway, iLambi Queen Restaurant kunye nabo beze kuntywila emanzini, iLumba Dive Shop okanye kwabo basebenzisa iimarina ezimbini zesi siqithi. Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo, njengayo yonke iCarricaou.
Esi studio sinebhedi ephindwe kabini, ikhitshi esisiseko kunye neshawari / igumbi lokuhlambela. I-Tyrell Bay sisiseko esifanelekileyo sokuhlola isiqithi sonke ukusuka okanye ukubamba isikhephe sokukhwela kwesinye isiqithi.
Eli gumbi le studio lipholile kwaye licocekile. Unokuphuma ngaphandle komnyango wakho kwaye ujabulele ikofu yakho yasekuseni ngombono omkhulu wolwandle kunye neenqanawa, ujikelezwe zizityalo zam ezonwabileyo kunye neentyatyambo!
Iibhasi kulula ukuzifumana kule ndawo kwaye ungaphakathi komgama omfutshane wokuhamba wevenkile encinci, iimarinas ezimbini kule ndawo kunye nemivalo.
Ndiyafumaneka ukwenza undwendwe lwam luhlale lukhumbuleka kangangoko ndinako nangayiphi na indlela endinokunceda ngayo